Fanamby vaovao isan'andro
Fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina
Teny marina avy am-bavan'ny ankizy sy amin'ny teny nindramina
Pejy misimisy momba ny fitaizan-janaka
Ny ankizy dia mihaika anao ary indraindray ny ray aman-dreny vitsivitsy dia diso fanantenana. Mety hahasosotra izy ireo ary mitombo be ny vidim-piainana rehefa mitombo ny fianakaviana.
Tsy sarotra ny fananana zanaka, noho izany dia tena manabe ny ankizy
Ankoatr'izay, voafetra mafy ny hetsika mpivady tantaram-pitiavana sy ny fahafaham-po amin'ny fialambolinao manokana. Fitsapana indraindray no andramana, fa ... Ny ankizy manome mihoatra ny vola! Ny ady hevitra voalohany izay miresaka ho an'ny ankizy sy ny ankohonana ary tena mavesatra indrindra dia ny fitiavana.
Mitaiza ankizy - © goodluz / Adobe Stock
Ny fitiavana irery ihany no tsara eto an-tany izay mitombo ary miverina amin'ny vola tsy voavidy ianao raha manome izany. Ny olona tsy mandray fitiavana dia tsy azo iainana toa ny tsy manana rivotra iainana. Amin'ny fitiavana dia misy koa ny fahatsapana filaminana.
Mandritra izany fotoana izany, miaraka amin'ny andraikitra ho an'ny zaza dia manana andraikitra lehibe koa ianao. Satria raha tsy misy fitiavana, fangoraham-po, fiheverana, filaminana ary fahatakarana, ny zaza iray dia tsy afaka miatrika ny fahalehibeazany. Amin'ny maha-ray aman-dreny dia ilaina tsy azo soloina ianao. Ary iza no tsy mankafy ny fahatsapana fa ilaina?
Miaraka amin'ny ankizy ianao dia miatrika fanamby vaovao isan'andro. Tsy azonao lazaina mialoha mihitsy izay ho entin'ny andro vaovao. Angamba hahagaga anao ny zaza amin'ny voninkazo vita amin'ny majika? Angamba avelanao irery ao an-trano ilay zaza mandritra ny roa minitra ary aorian'izany dia miloko marevaka hatrany ambony ka hatrany ambany?
Ny ankizy dia manome loko maro, manaitra ary mendrika honenana kokoa ny fiainana. Azonao atao ny matoky voromailala matahotra ny fahazarana isan'andro ary manadino izany. Nisy drafitra natao ho an'io andro io ve? Avy eo azonao antoka fa tsy maintsy hatsipy ireo na ahitsy farafaharatsiny.
Miaraka amin'ny ankizy dia azonao antoka ny hivoatra tsy tapaka amin'ny faritra toy ny tsy faharetan'ny fotoana, ny fahalalahana ary ny fahaleovan-tena.
Mandritra izany fotoana izany dia manana fotoana ahafahana mahita indray ilay zaza ao anaty ianao. Mahita zavatra amin'ny maso vaovao sy miaina an'izao tontolo izao amin'ny fomba fijery hafa tanteraka. Ny fihomehezana sy ny fitoniana dia ho eo indray ary ho hiaina ny herimpo ianao hanao zavatra tsy mahazatra na mety ho adala mihitsy aza. Ohatra, raha tsy manan-janaka, mieritreritra ny hikororoka toy ny gana eo afovoan-tsenambarotra ve ianao?
Mandritra izany fotoana izany, mamporisika anao tsy misy saina ny famoronana anao. Efa resy lahatra foana ve ianao fa olona tsy dia mahay mamorona sy tsy marobe? Mampiseho aminao ny zaza ny fahaizanao mamorona sy ny zavatra tsara mahaforona noforoninao.
Ankoatr'izay, ny ankizy dia mitazona ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina. Mila fihetsiketsehana sy hetsika ny ankizy ary tampoka eo dia hitanao fa milomano eo amin'ny kianja filalaovana ianao. Na sendra fanontaniana izay mety tsy noeritreretinao taloha akory.
Ny fitaizan-janaka dia manome antsika fotoana tokana ahafahana misaintsaina ny tenantsika sy mampivelatra ny toetrantsika manokana.
Miaraka amin'ny ankohonanao dia tsy ho toy ny taloha intsony ianao. Tsy mahaliana anao tampoka ny zavatra lasa zava-dehibe aminao taloha. Toy izany koa, tampoka ny olona iray amin'ny tahotra izay tsy noeritreretin'ny olona ho azo atao mihitsy. Ireo traikefa rehetra ireo dia mahatonga anao hanana ny toetranao ary hamolavola ny toetranao.
Tsy ny vavan'ny zaza ihany no manambara ny marina. Antsika koa Pejy momba ny tenin'ny ankizy maro ny teny nalaina sy fahendrena ho hita izay manana fahamarinana kely foana farafaharatsiny. Ny fiainana miaraka amin'ny ankizy dia sady miavaka no mitovy foana. Samy manana ny zavatra niainany ny taranaka tsirairay, fa ny fitsipika dia mitoetra tsy miova.
Ny fananana zanaka, ny fitiavana azy ireo, ny fanomanana azy ireo amin'ny fiainana fa tsy ny famolavolana ny toetran'izy ireo fotsiny dia traikefa nahafinaritra - raha vonona handray anjara ianao.
Ny tsindry eo amin'ny rohy iray dia manokatra ny pejy voafantina:
Asa fananganana pejy fandokoana | asa
Rehefa mandainga ny ankizy - fanabeazana
Fanohanana zaza | Mitaiza zanaka
Ankizy, fitaizana sy olana isan'andro
Miaina ny natiora ary milalao ivelany | fampianarana
Fahamaotiana - fanabeazana